Dhaqaalahaaga | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Dhaqaalahaaga
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay dhaqaalaha. Dhaqaalahaagu wuxuu ka koobanyahay dakhliyo iyo kharashyo kaa baxa. Dakhliyo waa tusaale ahaan mushahaaro iyo lacag kaalmo ah. Kharashyadu waa waa lacagaha aad bixiso si aad u nolaato. Taasi waa tusaale ahaan kharashka kirada, cuntada iyo dharka.
In laga warhayo dhaqaalahaaga waxay muhiim u tahay in nolosha maalinlaha shaqayso. Haddii aad qorshayso dhaqaalahaaga waxaa sii fududaanaysa in lacagtu kugu filnaato. Qoraalkan waxaad ku akhrin doontaa waxyaabo ay ka mid yihiin dhaqaalaha guriga, xisaabaha iyo Hey'adda dawladda ee ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo.
Nolol shaqo oo siman iyo dhaqaale
Waxaa jira qaabab kala duwan oo loo helo lacag. Qaabka ugu caadisan waa in lacag laga helo in la shaqeeyo. Shaqo waxay kordhisaa fursada dhinaca amaan dhaqaale. Gudaha Iswiidhan waxaa is leeg ku dhowaad haweenka iyo ragga shaqeeya. Bilowgii 1970-yadii ayay dawladda Iswiidhan fulisay dhowr ah isbaddalo siyaasadeed kuwaas oo u sahlay haweenka inay ka shaqeeyaan meel ka baxsan guriga oo siisay haweenka isku filnaansho dhaqaale oo weyn. Isbaddaladan siyaasadeed ayaa keenay in:
in ay faa'iido dheeraad ah u yeelatay qoysaska ka kooban laba qof oo waaweyn in labaduba shaqeeyaan, marka la barbardhigo in qof shaqeeyo oo midna guriga la joogo carruurta.
waalidku waxay xaq u heleen inay qaybsadaan fasaxa marka ilmo dhasho. Iswiidhan waxay noqotay dalkii ugu horeeyay aduunka ee raggu xaq u heleen inay guriga la joogaan ilmahooda.
carruur badan ayaa awoodday inay tagaan dugsiga xanaanada.
Maantana dadka oo dhan iyadoo aan ku xirnayn jinsi ay helaan fursado isku mid ah markay noqoto dhinaca shuruudaha shaqo, mushahaaro iyo in labaduba awooddaan inay shaqeeyaan oo daryeelaan carruurtooda. Laakiin nolosha shaqadu weli ma ka jirto sinaan. Dhowr tusaale oo ka mid ah waa in haweenka iyo raggu badanaaba ka shaqeeyaan xirfado kala duwan iyo in xirfadaha haween badan ka shaqeeyaan ay badanaaba leeyihiin mushahaarooyin ka hooseeya xirfadaha ay rag badan ka shaqeeyaan. Tusaalooyin kalena waa in haween ka badan ragga shaqeeyaan wakhti nus ah iyo in haweenku qaataan fasax waalidnimo oo ka badan ta ragga. Taasi waxay cawaaqib ku yeelataa haweenka dakhliyadooda. Marka ay shaqeeyaan saacado yar waxay helaan lacag yar oo ay ku noolaadaan iyo lacag hawl-gab oo hooseysa.
Muhiimada kowaad sii kharashyada la bixiyo haddii lacaguhu aanay kugu filnayn. Kirada iyo korontada waa muhiim in la bixiyo. La xiriir kuwa kugu leh lacag haddii aanad bixin karin lacagta.
Akhri dheeraad ku saabsan xisaabinta miisaaniyada kuna qoran Hey’adda macmiisha boggeeda intarnatka.
Ma samaysay miisaaniyad?
Waa maxay dakhliyada iyo kharashyada aad leedahay adigu iyo gurigaaga bil walba?
Qaab sahlan oo wax loo iibsan karo ama xaajooyinka bangiga looa samayn karo intarnatka waa in la isticmaalo aqoonsiga elaktarooniga ah, tusaale ahaan BankID. Aqoonsiga elaktarooniga waa dukumeti aqoonsi oo elaktaroonig ah. Tan waxaa la barbar dhigi karaa kaar aqoonsi oo caadi ah.
Adigu waxaad BankID ka samaysanaysaa bangigaaga. Dalbashada way ku kala duwanyihiin bangiyada kala duwan. Adigu waxaad ku geli kartaa bangigaaga intarnatka oo akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sida aad u dalbanayso BankID.
Akhri dheeraad ku saabsan BankID kuna qoran bogga "La xiriirka hey’addaha dawladeed" ee Informationsverige.se.
Adigu waad u tegi kartaa bangiga oo bixin kartaa lacagta xisaabaadkaaga, laakiin tani waxay ahaan kartaa qaali. Bangiyo badan waxay qaadaan khidmad sare haddii aad dhinacooda ka bixinayso lacagta.
Waxaa badanaaba ka sahlan in laga bixiyo lacagaha dhinaca intarnatka. Tani xitaa way ka sii raqiisantahay. Si loo awooddo in lacagta looga bixiyo dhinaca intarnatka waa inaad xisaab ku yeelato bangiga. Bangiga ayaa markaas xisaabtaada ku xiriirin kara bangiga intarnatka. Isticmaalka bangiga intarnatka waxaad ku bixin kartaa xisaabahaaga dhinaca kombiyuutarka.
Miyay ku soo gaartay qaan-sheegasho been ah xilli ka mid ah wakhtiyada?
Miyaa uu kula soo xiriiray iibiye aad u malaynayso inuu doonayay inuu kaa khiyaameeyo lacag?
Haddii aad heshay xusuusin waa inaad sida ugu dhakhso badan ee suurtaga ah u bixiso lacagta si aanad u gelin deyn weyn.
Waxaa kale oo dhici karta in waraaqaha qaan-sheegashadu aanay ku iman wakthigooda dhinaca boosta. Haddii aad ogtahay inay ahayd inaad hesho qaan-sheegasho laakiin aanay ku soo gaarin waa inaad la xiriirto shirkadda kugu leh lacagta. Ka codso shirkada inay soo diraan qaan-sheegasho cusub si aanad ula kulmin kharashyo xusuusin oo laga maarmi karo.
Shirkaduhu waxay isticmaalaan shirkado u ururiya deynka si ay u helaan caawimaada inay helaan lacagta. Haddii shirkad deynka ururisa ay la wareegtay sheegashadan waa inaad deynkan siisaa shirkada deynka ururisa. Shirkad deynka ururisaa waxay saarataa khidmad taas oo ay tahay inaad xitaa bixiso.
Haddii aad hesho sheekasho deyn ururin waa muhiim inaad bixiso xisaabtan iyo khidmada deyn ururiyaha labadaba, haddii kale deynkan waxaa loo gudbinayaa Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo. Markaas waxaad khatar ugu jirtaa in aad hesho calaamadda deyn xumada iyo kharashyo ka sii badan maadaama Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha la bixin waayo ay qaadan karto lacag si ay uga shaqayso arrintan. Waa shirkado kala duwan oo dhinaca macluumaadka deynka ah kuwa bixiya calaamadaha deyn xumada, maaha Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo.
Akhri dheeraad ku saabsan amarka lacag bixinta kuna qoran Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo boggeeda intarnatka.
Akhri dheeraad ku saabsan calaamadaha deyn xumada kuna qoran bogga intarnatka ee Hallå konsument.
Tusaale: Reza wuxuu leeyahay calaamadda deyn xumada
Reza wuxuu raadinayaa guri cusub. Isagu wuxuu helay guri uu doonayo oo codsaday kaas. Laakiin jawaabta uu ka helay guri kireeyaha ayaa niyad jebisay. Isaga waa loo diiday gurigan. Sababtu waa inuu leeyahay calaamad deyn xumo.
Wakhti ka hor Reza muu haysan lacag badan. Isagu muu haysan awood dhaqaale oo uu ku bixiyo qaan-sheegashooyinka. Taas ayaa keentay in ugu dambeyntii uu helay calaamada deyn xumada. Sidaas darteed ayaa guri kireeyuhu aanu uga kireyn karin gurigan isaga.
Adigu waxaad heli kartaa talo bixin bilaa kharash ah oo ku saabsan heshiisyada, rukumashada, xisaabaha lacag bixinta iyo deymanka
Talo-bixinta miisaaniyada dhaqaale iyo deynka
Wareysi lala yeeshay Davor Vuleta, Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo.
Anigu waxaan imi Iswiidhan qaxooti ahaan markaaan ahaa 14 jir. Waxaanu joognay saddex sano kaam qaxooti ka hor intaan qoyskaygu helin sharci deganaansho. Ka dib markaan dhigtay dugsiga sare ka dibna waxbarasho jaamacad ayaan bilaabay inaan ku shaqeeyo kormeere jooga Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo sanadkii 2007. Tan iyo 2013 waxaan cilmi-baaris ku sameeyaa dhinaca dadka ajnabiga ah amaankooda dhaqaale ee gudaha Iswiidhan. Anigu waxaan wadaa waxbarashadii PhD:da, micnihii waxbaan bartaa si aan u helo shahaado cilmi-baare, dhinaca maaddadaas ee jaamicadda Lund.
Aniga waxaa igu adag inaan bixiyo xisaabahayga. Maxaan sameeyaa si aanan u gelin diiwaanka Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo?
Waxaa jirta wax badan oo aad samayn karto si aanad u gelin diiwaanka Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo. Ta ugu muhiimsan waa inaad firfircoontahay oo isku deydo inaad xaliso xaaladan. Waa muhiim inaad si toos ah u dhaqaaqdo oo muhiimad siiso waxa ay tahay in aad markiiba bixiso, tusaale ahaan kirada, korontada, cuntada ama moobilka.
La xiriir kuwa kugu leh lacag oo u sheeg xaaladu siday tahay. Laga yaabee inaad ku heshiin kartaan in la qayb qaybiyo lacag bixintan ama la helo xal kale. Ka fikir in ay tahay inaad xitaa bixiso kharashyadaada kale.
Talo kale oo muhiim ah waa inaad furto dhammaan waraaqaha aad hesho. Haddii aad la nooshahay saaxiibo oo boostaadu tagto cinwaan kale waa muhiim inaad badanaaba soo qaadato boostaada. Dhinaca bangiga intarnatka ayaad qaan-sheegashooyinka badankooda ka dhigi kartaa inay noqdaan elaktaroonig ama si otomaatig ah loo goosto bil walba. Tani micnaheedu waa in mar kastaba aad qaan-sheegashooyinkaaga ka helaysid oo ay kuugu jiraan Bangiga intarnatka. Haddii aad doorato ooto-jiiro waxaa lacagta qaan-sheegashada si otomaatig ah looga goosanayaa xisaabtaada bil walba. Sidaas darteed hubso in mar walba lacag kuugu jirto xisaabta si lacag bixintan u samaysanto.
Miyaa Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo isticmaali kartaa xoog si loo helo deymanka?
Maya. Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo ma loo oggola inay sinnaba u isticmaalaan xoog si loo helo deymanka.
Ta aanu samaynaa waa inaanu baarno haddii qofka deyman lagu leeyahay leeyahay wax hanti ah oo aanu la wareegi karno si loo bixiyo deymankan. Laga yaabee inay jiraan lacago yaala xisaab bangi, ama qayb ka mid ah mushahaarada, taas oo laga bixin karo deymanka. Waxaanu xitaa iibin karnaa baabuurta, dhismayaasha iyo wixi kale ee lagu bixin karo deymanka, tusaale ahaan saacado ama sawirada derbiyada.
Miyaan galayaa xabsi haddii aan bixin waayo xisaabahayga?
Maya. Gudaha Iswiidhan ma ka aha dembi in lagugu leeyahay deyn.
Haddii aad bixin waydo qaan-sheegashooyinkaaga waxay qaan-sheegashooyinkaas si tartiib ah u galayaan diiwaanka Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo. Waxaanu baarnaa haddii aad leedahay dakhli ama mulkiile ka tahay wax aanu iibin karno. Waxaanu mar walba hubsanaa in aad haysato lacag kugu filan si aad isaga bixiso kirada, raashinka, iyo tusaale ahaan safarada lagu tagayo lagagana imanayo shaqada. Sidaas darteed ayay muhiim u tahay inaad ka jawaabto waraaqahayaga ama na soo wacdo si aanu u haysano macluumaad sax ah dhinaca tusaale ahaan inta uu yahay kharashka gurigaaga.
Anigu ma fahamsani lacagta dulsaarka ah. Waa maxay sababta ay tahay inaan u bixiyo lacag dulsaar ah? Sababtee ayaa lacagta dulsaarka ay aad ugu sareysaa?
Waxaanu helnaa su’aalo ku saabsan lacagta dulsaarka ah oo nooga yimaada dadka dalka ku cusub iyo dalka ku dhashay gudaha Iswiidhan. Badanaaba waxay ku saabsantahay xisaabta lacag aan lagu bixin wakhtigeedi oo markaas qofkii doonayay in lacagta la siiyo ayaa dalban kara lacag dulsaar ah. Haddii aad heshiis la gashay shirkad, sida markaad kabo ka iibsatay intarnatka, waxaad isla mar ahaantaas oggolaatay in aad bixiso lacag dulsaar ah haddii aanad lacagta ku bixin wakhtigeeda. Mararka qaarkood macluumaad ku saabsan taas ayaa ku qornaan kara meel ay adagtahay in la helo, ama ku jirta qoraal aad u yar halka ugu hooseysa ee qaan-sheegashada. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in aad mar walba si fiican u akhrido waxa aad run ahaantii oggolaanayso marka aad wax iibsanayso, tusaale ahaan dhanka intarnatka.
Miyaan heli karaa dhalashada Iswiidhan inkastoo deyn ay igu leedahay Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo ama aan calaamado deyn xumo kaga jiro shirkadaha macluumaadka deynka?
Haddii lagugu leeyahay deyman waxay taasi raad ku yeelan kartaa fursaddaada in aad noqoto muwaadin Iswiidhish ah. Waa Hey’adda socdaalka kuwa go’aamiya hadii aad noqonayso muwaadin Iswiidhish ah. Haddii Hey’adda socdaalka u baahato inay ogaadaan in aan lagugu lahayn deyman ama markaad bixisay wixi jiri kara ee deyman ah dhinaca Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha waxaanu kaa caawin karnaa qoraalka dhinaca diiwaankayaga.
Haddii aad doonaysid inaad ogaato haddii aad leedahay calaamad deyn xumo ah waa inaad la xiriirto shirkadda macluumaadka deyn xumada. Waa shirkadaha macluumaadka deyn xumada kuwa ka shaqeeya dhinaca calaamadaha deyn xumada, maaha Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo.